यस्ता छन् नेपालजस्तो गरिब देशका धनी मन्त्रीहरु, कसको कति छ सम्पति ? « Surya Khabar
यस्ता छन् नेपालजस्तो गरिब देशका धनी मन्त्रीहरु, कसको कति छ सम्पति ?
काठमाडौँमा फरक फरक स्थानमा तीन व्यक्ति मृत्त फेला
काठमाण्डौ । एकतिहाइ नेपालीलाई बिहान-बेलुकी छाकटार्न मुस्किल परिरहेको मुलुकका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पाइएको छ।
सरकार परिवर्तन हुँदा प्रायः मन्त्री हुन नछुट्ने गच्छदारको सुनसरी दुहवी नपामा २(७ वर्गमिटरमा रहेको २ कोठाको टिनको छाना भएको पक्की घर, श्रीमती निर्मलाको नाममा विराटनगर महानगरपालिका-१५ मा दुईतले पक्की घर छ। त्यसैगरी, ७५ तोला सुनका धनी गच्छदार र उनकी श्रीमतीको नाममा दुहबी, विराटनगर, ललितपुरको बुङमतीलगायत विभिन्न स्थानमा जग्गा(जमिन रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
बिहीबारको अन्नपूर्णमा लेखिएको छ, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री आशा कोइराला र गरिबी निवारण राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्का पनि करोडपति देखिएका छन्। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएकामा २१ जना मन्त्री र पाँच राज्यमन्त्री छन्। सरकारका मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीलगायत सम्पूर्ण मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
अझै ३२ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। ५६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री दीपक बोहरा, सुनीलबहादुर थापा, विक्रम पाण्डे, मोहनबहादुर बस्नेत, महेन्द्र यादव, अम्बिका बस्नेत, भीमसेनदास प्रधान र सञ्जयकुमार गौतमको भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
नेपालमा फेरी अर्को न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावः अझै केही दिन मौसम बदली रहने